Death Note 2006 | Movie Review ျမန္မာ စာတန္းထိုး
Crime Drama Comedy Adventure Japan
Death Note 2006 သင်စာအုပ်တွေ ဖတ်ရတာ ၀ါသနာပါတဲ့သူလား။ စာရေးရတာရော ၀ါသနာ ပါပါသလား။ ဒီလိုလေး စိတ်ကူးယဥ်ကြည့်ရအောင် သင်စာရေးနေတဲ့ စာအုပ်က လူသတ်လက်နက်ဖြစ်လာ မယ်ဆိုရင်ရော ?? နာမည်လေးရေးလိုက်တာနဲ့ အဲ့နာမည်ပိုင်ရှင်က သေဆုံးမယ်ဆိုရင်ရော ?? သင်ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲ။ အဲ့စာအုပ်နဲ့အတူ ပါလာမယ့် သေမင်းတမန်ကြီးတွေနဲ့ပါ သင်စကားပြောရမယ်ဆိုရင်ရော သင်အဆင်ပြေပါ့မလား။
ဒါတွေအားလုံး ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ ရိုက်ပြသွားပါတယ်။ ကဲ ဇာတ်ကားလေးက ကြာနေပြီမယ့်လဲ ပြန်ကြည့်ရင်လဲ စိတ်၀င်စားဖို့ကောင်းနေတုန်းဇာတ်ကားလေးပါပဲ။